1 year ago 1249 Qoodi
Abbaan Alangaa Waliigalaa jalamurtii Manni Murtii Olaanaa Federaalaa Ramaddii Lidataa galmee obbo Jawaar Mahaammadfaa namoota 24n walqabatee 'ragaaleen Abbaa Alangaa dhaddacha banaa irratti yaa dhaggeeffataman' jechuun murteesse mormuun ture Mana Murtii Waliigalaa Federaalaatti oliyyannoo kan dhiyeeffate.
Mana Murtii Waliigalaa Federaalaatti dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaas kanaan dura Abbaa Alangaa fi abukaatoowwan Obbo Jawaar Mahaammadfaa kan falmisiise yemmuu ta'u har'a murtee kenneera.
Haaluma kanaan manni murtichaa Abbaan Alangaa 'ragaaleenkoo eenyummaansaanii dhokfamee dhaddacha cufaafi golgaa duuba ta'un jechasaanii yaa kennan' kan jedherratti ragaa akka dhiyeeffatu jechuun murteesse.
Kunis Abbaan Alangaa ragaalee namootaa qopheeffatee 146n walqabatee yaaddowwan nageenyaa qaburratti Mana Murtii Olaanaa Federaalaaf ragaa akka dhiyeessu ajaje.
Manni murtichaas ragaa Abbaan Alangaa dhiyeessu akkasumas falmii abbaa alangaafi himatamtootaa/ abukaatoowwan isaanii gidduutti adeemsifamu bu'ureeffachuun murtee kenna jechuudha.
Haa ta'u malee abukaatoowwan Obbo Jawaar Mahaammadfaa murtee Mana Murtii Waliigalaa Federaalaatti dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaa kenne kana komataniiru.
¤ Falmii Abbaa Alangaa fi Abukaatotaa...
Abbootin Alangaa Manni Murtii Olaanaa Federaalaa ragaaleen abbaa alangaa yaaddoo nageenyaa qabumoo hin qaban kan jedhu qorachuuf yookin murteessuf akkasumas dhaddacha cufaafi golgaa duuba ragaa yaa bahan jechuuf aangoo hin qabu jechuun falmanii turan. Aangoon kun kan Abbaa Alangaa ta'uu himanii turan.
Haa ta'u malee, Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa murtee har'a dabarseen dhaddachi cufaamoo banaa ta'uu qaba kan jedhu akkasumas ragaan tokko golgaa duubamoo ifatti jecha yaa kennu kan jedhu murteessuun aangoo mana murtii ta'uu hime.
Gama biraatin, Abbaan Alangaa himatamtootni galmee Obbo Jawaar Mahaammadfaa kessaatti argaman angawoota dhaaba siyaasaafi eegdoota isaaniidha, deeggartoota heddu qabu, kanaaf yoo ragaalen keenya dhaddacha banaarratti jecha kennan miidhaan irra gahuu danda'a jechuunis falmee ture.
Abukaatoowwan himatamtootaa immoo ragaaleen abbaa alangaa dhaddacha cufaafi golgaa duuba ta'uun jecha kennuun mirga heeraa himatamtoota dhimmisaanii dhaddacha banaa keessatti akka ilaallamuuf qaban kan sarbu akka ta'e himuunsaanii ni yaadatama.
Ragaaleen golgaa duuba ta'uun jecha kan kennan yoo ta'e maamiltootni isaanii gaaffilee qaxxaamuraa gaafachuuf kan rakkatan ta'uus dubbatanii turan.
Keessattuu himatni maamiltoota isaanii irratti hundaa'e hidhaa waggaa torbaa hanga umrii guutuu akkasumas du'aan kan adabsiisu ta'uu kan himan abukaatootni himatamtootaa "himata akkanaa irratti ragaaleen golgaa duubaa jecha yaa kennan jechuun haqa-qabeessa miti" jedhaniis turan.
Kana malees abukaatootni Abbaan alangaa yaaddoo nageenyaa ragaaleensaa qaban bifa amansiisaa ta'een mana murtiif dhiyeessuu qabaatullee Abbaan alangaa kana akka hin raawwanne himanii turan.
Gama biraatin Abbaan alangaa namootni galmee himataa Obbo Jawaar Mahaammadfaa jalatti himataman angawoota dhaaba siyaasaafi eegdota isaaniiti jechuun kan kaase mormuun lakkofsi namoota angawaa dhaaba siyaasaa ta'an sadi kan hin caalle ta'uufi kunneen biroo namoota hojiilee garaagaraa irratti bobba'an ta'uu dubbataniis turan.